INTOMBAZANA YEBHOKHWE: KUZO ZONKE IIVENKILE ZEALBHAMU - IINDABA
Kuzo zone ii
Exhotyiswe ngee-guitars ezijikelezayo kunye nonikezelo olutsha lwe-elektroniki zesilvery, ibhendi yaseLondon yaseLondon ibhala uxinzelelo kunye neengoma kwiingoma ezigcwele ukungcangcazela komqolo.
Dlala iTrek Badibaba -Intombazana yebhokhweUkuhamba Ibhendi / Thenga
Kwingoma egqwesileyo evela kwi-Goat Girl ye-2018 enegama elinegama, iqela laseMzantsi London licinge ngokutshitshisa intloko egqwethekileyo kuloliwe. Nangona kunjalo irekhodi litshitshiswe ngamandla angazinzisiyo kolunye uhlobo lwezothutho: enye ibhasi yasebusuku, enqumla kwikomkhulu ngexesha lokuthakatha xa iingqondo eziqhelekileyo, amandla, kunye nokuhombisa kuye kwadlula. Akukho namnye wabarhubuluzi aboyikekayo, abapolitiki be-shitheel, okanye abo badibana nabo nge-scuzzy ababecula malunga nabo bevela kummandla wefantasy, kodwa ibali ngalinye elothusayo lesixeko ligqithisile kwi-surreal blur, njenge-warped UWilliam Hogarth izitrato zesitrato zikrobe ngefestile edibeneyo.
Kevin Amasango full album
Ukudlala ngokungakhathali-kusetwe kwingoma engenasiphelo yokuqhwatywa komhlaba kwe-punk kunye nelizwe le-gothic-ifanelekile ibhendi onokufunga ukuba iphakamise amagama abo eqonga kumdlalo wabantwana owoyikisayo (imvumi uClottie Cream, isiginci se-LED, isigubhu sikaRosy Bones, kunye nebassist UHolly Hole, othathe indawo kaNaima Jelly ngo-2019). Kodwa obo bumnyama, i-carnivalesque exuberance ikufutshane ngokubonelela Kuzo zone ii . Apho i-predecessor yayo icule iingoma ezili-19 kwimizuzu engama-40, ezi zili-13 zolule ngokuxakekileyo. Endaweni yokugxalathelana phakathi kwezitayile, ubukhulu becala banamathela kwiiguitar ezitshisayo kunye nesibonelelo esitsha sokufumana izinto ze-elektroniki zesilvery-ngamanye amaxesha ukugxotha, ngamanye amaxesha ukubetha, ngamanye amaxesha kubonakala ngathi kukuhamba nje okufutshane. Isiqingatha se-mellifluous kunye nesiqingatha esisongelayo, bahlala bebhala nge-draining yexinzelelo kunye noxinzelelo. Nceda ungandishiyi ndedwa / Ndijonge ngefestile, intones L.E.D kwiiXhala loVakalelo, ezilahlekileyo kunye ezingenazidweliso kwi-woozy yayo, ukubetha okungaphantsi.
I-Ennui kunye ne-disillusionment igcwele i-LP: I-Space Cowboy enesiphekepheke, enombala oqaqambileyo iqala njengotyelelo lwenyanga lomlingo kwindawo yaseClottie, kodwa iphela ngokuqonda kwakhe ukuba izinto ezintle azisiyiyo le zibonakalayo. Rhoqo, iingoma juxtapose ngamalungiselelo amenyezelayo kunye nezandi ezingahambelaniyo, ezifanayo nendlela iStereolab eyahlula ngayo iimbono ezingacacanga nezwi elimnandi likaLaetitia Sadier. Siyaphi?, Ukwehliswa kokuxoka, isitshisi esinetyhefu, iichimes ezinje ngemvano-zincwadi yabantwana ngaphambi kokungenisa is synth njengesiyolo somgunyathi wamazinyo. Ndiqinisekile ukuba iyanuka phantsi kolusu lwakhe / Apho ii-pores zikhupha yonke intiyo ngaphakathi, uClottie uyakhalaza. Ukuvala ngaphakathi, ngeli xesha, iichips kude nephupha layo le-ice-cream lori kunye ne-synths eqhubekayo, evakalisa indlela iingcinga ezinenkohliso ziyityhefu ingqondo yakhe njengomhlaba wasebusuku omileyo.
Ingqondo yokungaxhamli isebenza ngakumbi xa Kuzo zone ii Ukutshintsha kugxile kwizinto ezoyikisayo ezinkulu. Nangona i-opener Pest icaphuka ngokuchasene nengxaki yemozulu, inqanaba lokuhanahanisa kwabantu baseNtshona, kwaye abantu belele ngokungalunganga bekhohlwa, iyabuphelisa uburharha kumanqaku amahle, asezulwini. Emva kwexesha, i-Goat Girl ichrip umoya opholileyo weBabidaba ngokungathi ubengaculi ngengqondo ngelixa esenza izitya, engayikhathaleli i-elektroniki egungxuzela njengokukhwela kumhlaba ongenamhlaba. Ndiziva ngathi sinosulelo, ii-deadpans ze-L.E.D Qhubeka ngathi ukhuselwe / ngokungathi asichaphazeleki. Idlala ngokungathi yingoma ebusuku Indawo yaseTwilight isiqendu apho inyani iyawa kodwa wonke umntu unyanzelisa ukuba akukho nto iphosakeleyo.
Iibhanti ezingaphezulu zabahambi ngeenyawo zinokuyenza into efanelekileyo kwaye buthuntu kwezi zihloko zinzima, kodwa Kuzo zone ii ayikho-kilter kakhulu ukuba ingashunyayelwa. I-Crack, ingoma edumayo, engqokolayo ngabantu ababalekayo umhlaba ongcoliseko ngenxa yomoya, amajelo omoya olahlekileyo ka-Arthur C. Clarke ibali; Bayakuluma bajika iakhawunti yokuba ukhwekhwe lube luloyiko lomzimba. Eyona nto yothusayo yi-P.S.Tea, i-comic farce emnyama emnyama eneenkcukacha okwangoku enye ukuhanjiswa kwezithuthi zikawonke-wonke ngejerk efanelekileyo, ngeli xesha indoda esikhepheni etshisa iRosy ngekomityi yeti ebilayo. Indoda esisimumu ayinakuze indijonge, bayapheka, kodwa ilizwi labo ligcina ubumnandi bokucula ngelixa i-manic synths ibhabha njengomxholo wekhathuni wakusasa, ungcwaba umsindo phantsi kokunyanzelwa. Yinto encapsulation egqibeleleyo yendlela Kuzo zone ii uhlaziya isandi seNtombazana yebhokhwe: Nokuba yeyiphi enye into etshintshayo, ukufumana iindlela ezingaqhelekanga zokuthetha iinyani ezibuhlungu iseyona nto bayenzayo.
Thenga: Urhwebo olurhabaxa
(I-Pitchfork ifumana ikhomishini ngokuthenga okwenziwe ngokudibanisa indawo yethu.)
Thatha yonke iMigqibelo nge-10 yee-albhamu zethu eziqwalaselwe kakuhle kule veki. Bhalisela i-10 yokuva incwadana yeendaba Apha .
Eyona ngxolo ilungileyo yokucima ii-headphone 2020
ookumkanikazi beminyaka yobudala bamatye
I-albhamu yeswekile emdaka emdaka
I-nirvana kwiingoma zesibeleko